ग्यास्ट्रिक बढेर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै बसेर यसरी पाउनुहोस बर्षौ देखीको ग्यास्ट्रिकबाट छुटकारा ! « गोर्खाली खबर डटकम
९. लसुन २.३ वटा लसुनलाई आगोमा पोल्नुस् त्यसपछि त्यसको बोक्रा निकालेर खानुहोस् । ताजा लसुनलाई पिसनु, जिराको धूलो, जिराको गेडालाई पानीमा राखी उमाल्नु र यसको सेवन गर्नु ।
प्रतिनिधी सभा विघटन विरुद्दको मुद्दामा आजबाट सुनुवाई हुने